Bong Manufacturers , mpamatsy - China Bong Factory
• Haavo 35cm
Izy io dia ahitana kojakoja marobe, toy ny fantsona misy kofehy, takelaka honeycomb, beaker, sns., izay mamorona bong mpanamory tsy manam-paharoa.Sarotra kokoa ny fizotrany, noho izany dia kely ny vokatra azonay, saingy tsy ampy hatramin'izay.
Bong mpanodina 30cm misy fantsona misy kofehy sy toho-tantely
lehibe mpanodina bong
Ny vera tsofin-tanana, matevina ary mora entina, dia mitondra fahafaham-po ho anao.
Fitaratra rano fantsona Shisha Hookah fitaratra sigara fantsona fifohana sigara Accessories Glass Beaker fantsona
Ny bongs beaker no fenitra hatramin'ny nisian'ny bongs.Mety hamirapiratra ao anatin’ny maizina izy io ary mety amin’ny fety.
• Haavo 25cm
• fitaratra 5mm
• Tonga ny vilia baolina 19mm ary miparitaka ambany
Vidiny:8.7USD ~ 16.7USD
Raha mila santionany ianao dia mifandraisa aminay, afaka manao santionany izahay araka ny endrikao.
Tonga ny vilia baolina 14mm
Vidiny: 15.8USD ~ 19.9USD
Mifandraisa aminay mba hahazoana santionany
Fitaratra rano fantsona Hookahs solika Rigs DAB Recycler Rigs
• Haavo 23cm
Ny teknôlôjia Klein Recyler dia mitazona ny rano sy ny setroka tsy mitsaha-mikoriana rehefa mamely voalohany ny amponga, ny atody Faberge, ary ny farany ny tornado kely mba hanivanana ny setrokao ary hanome traikefa amin'ny fifohana sigara!
Ambongadiny Glass Bong Fifoka rano fantsona vaovao rano fantsona tanana recycler Bong
Toerana niaviany: Hebei, China Laharana modely: CH-023
50 hatramin'ny 499:36.5USD
500 hatramin'ny 4999:33.3USD
5000 sy mihoatra: 31.7USD